China izingxenye zeJet Mil ifektri abakhiqizi | Qiangdi
1.the eziveza ngaphandle, ukuvimbela impahla ekungeneni ngaphakathi ke ujamu. Umgogodla we-2.valve ne-valve ukhipha izingxenye, akukho deformation ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside. Inqubo ye-3.CNC iqinisekisa ukunemba okuhle.
1.the eziveza ngaphandle, ukuvimbela impahla ekungeneni ngaphakathi ke ujamu.
Umgogodla we-2.valve ne-valve ukhipha izingxenye, akukho deformation ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside.
Inqubo ye-3.CNC iqinisekisa ukunemba okuhle.
Imishini yomshini we-Double Screw Cone Mixer
I-DSH double screw mixer ihlanganisa i-powder, i-granule nokuxuba oketshezi. Ukujikeleza kwe-twin screw mixer kuqedwa ngeqoqo lama-motors nama-cycloid reducers. Ngokuxubana okungalingani ngezikulufo ezimbili, uhla olushukumisayo luzonwetshwa futhi isivinini esinyakazayo sizoshesha. Umshini wokuxuba ukhuthazwa yimiklamo emibili engalingani yokujikeleza okusheshayo, kwakheka amakholomu amabili angahambelani ahamba phezulu odongeni lwesilinda. Ukuvula ingalo eqhutshwa yi-orbit evuthayo, yenza okokuvunguza kwezinga elihlukile kungene esitokisini emvilophini, ukuhlukaniswa kwengxenye yento ekhuthazwayo, enye ingxenye yalokhu kuphonswa isikulufa, ukuze kuzuzwe indingilizi egcwele yokuthwala izinto ivuselelwa njalo. Izinto ezimbili okukhulunywe ngazo ngenhla bese zibuyiselwa emgodini ophakathi nendawo wesikhungo, zakha ukwehla kwezinto futhi zengeza imbobo engezansi, ngaleyo ndlela yakhe ukujikeleza okuhambisanayo.
Isikhathi sokuxuba esifushane imizuzu engu-5-15
Ukukhishwa kwe-3.Clean & akukho okusele
4.Central osenyameni valve:
I-elektroniki, i-pneumatic, ibhukwana (ngokuzithandela)
I-valve yebhola, i-valve ye-flap, i-valve yesango lommese, i-butterfly valve (ngokuzithandela)
5.Main shaft uphawu: Stuffing uphawu nomoya purge uphawu
6.Drive:Siemens motor, cycloid noma igiya reducer
7.Limit / switch switch (kuyakhetheka)
8.Ijacket yokushisa / yokupholisa uyazikhethela)
Isigaxa isicelo sokuxuba:
Isilinganiso sezinto ezisetshenziswayo sabampofu, izinhlayiya ze-powder ziyizinto ezinkulu kakhulu;
I-2.Ifanelekele inqubo yokuthambisa i-ceramic glaze, izinhlayiya ezibonakalayo azikudlisi noma ziphukile;
Izinto ezizwela ukushisa ngeke zishise kakhulu;
I-4.Inqubo yokuxuba i-powder-powder kulula kakhulu ukwengeza izimo zokusebenza noma ukuhlinzeka ngoketshezi ngobuningi bezindlela zokufafaza;
5.I-valve engezansi yokuhlukaniswa kwempahla elula, kusukela phansi kokuvunguza akukho zalapho, ngakho-ke akukho mkhuba ocindezelwe
Isilinganisi sebhebhoni esivundlile
Isilinganiselo sokuxuba esime kabili siqukethe ithangi elimise okwe-U, ikhava ephezulu enezikhala (noma ngaphandle), ishafula elilodwa lifakwe izingqimba ezimbili zokuxuba iribhoni, iyunithi yokudlulisela, ifreyimu yokusekela, into yokufaka uphawu, isakhiwo sokukhipha nokunye. Izindwangu zeribhoni zihlala zingqimba ezimbili. Iribhoni engaphandle lesendlalelo lenza izinto zihlangane kusuka emaphethelweni amabili kuye enkabeni kanye nebhebhoni elingaphakathi lesendlalelo lenze izinto zisabalale ukusuka enkabeni kuye emaphethelweni amabili. Izinto zokwakha zakha i-vortex ngesikhathi sokunyakaza okuphindaphindwayo nokuxubana okufana.
1. Izinto: insimbi engagqwali 304 / 316L noma i-Q235 yensimbi emnene;
2.Ukwelashwa komhlaba: upende (insimbi emnene), upholishi / sandblasting (insimbi engagqwali);
3. I-ribit agitator: izingqimba eziphindwe kabili nezikhombisi-ndlela eziphindwe kabili;
4. Ithangi lokuxuba: ithangi eliqondile, elimise okwe-U;
5. Shaft: enezingqimba, ozwakala, ebalulekile shaft olulodwa;
6. Isikhathi sokuxuba: imizuzu engu-5-15;
7. Imodeli yokusebenza: ukuxuba i-batch;
Isinciphisi sejubane: isinciphisi se-cycloid;
9. Ijubane lokuzungezisa: isivinini esimisiwe;
10. Main shaft seal: (Teflon) ukugxusha uphawu noma umoya wokuhlanza umoya;
11. Ukuvuleka: ukondla okungena, umgodi, kanye nembobo yokuhlola / yokuxhuma;
12. I-valve yokuchitha: i-pneumatic noma i-manual flap discharge valve;
13. Isimo sokusebenza: I-NPT (ingcindezi ejwayelekile nokushisa);
14. Hhayi umsebenzi osindayo: umxube ngeke aqaliswe ngezinto zokulayisha;
15. Ukunikezwa kwamandla: 220V 50HZ isigaba esisodwa / 380V 50HZ 3 isigaba;
16. I-elekthronikhi engeyena eyeqiniso (imoto, izinto ze-elekthronikhi, ikhabhinethi yokulawula);
Langaphambilini IJet Micron Grader Yokuhlunga
Olandelayo: I-LSM Vertical Wet Stretring Mill